Umuntu wesifazane uzifihla kanjani ukuthi uyakuthanda | Amadoda anesitayela
Umuntu wesifazane uzifihla kanjani ukuthi uyakuthanda?
U-Alicia tomero | 09/06/2022 10:00 | Izithandani Nezocansi
Ingabe kwenzeka kuwe ukuthi leya ntombazane oyithandayo, uyakuthanda nawe, kodwa uyafihla? Asazi ngempela ingaphakathi labantu, kodwa ngenxa izimpawu nezizathu ezahlukene awukwazi ukufihla ukuthi umuntu uzizwa ekhangwa futhi uziphatha ngendlela eyinqaba.
Owesifazane ukhangwa owesilisa angase afihle noma angasifihli isimo esinjalo, kodwa uma uthando lwakhe lunamandla kakhulu ingase ngisho ikhubazeke. Ngisho nabo bonke ubufakazi noma izimpawu ezimbalwa, uma ungeke uqiniseke ukuthi intombazane iyakuthanda noma kungani ingasho lutho, mhlawumbe kufanele kwenziwe okuthile ngakho. Thola ukuthi yini engemuva kwentombazane efihla uthando lwayo.
1 Kunezimpawu ezikhombisa ukuthi uyakuthanda
2 Izizathu zokuthi kungani owesifazane engalinge ukuthatha isinyathelo sokuqala
3 Umuntu wesifazane uzifihla kanjani ukuthi uyakuthanda?
Kunezimpawu ezikhombisa ukuthi uyakuthanda
Inzwa yesithupha lokho kungahlala kithi njalo isitshela ukuthi kukhona okunye. Lowo wesifazane angakhipha amasignali angadalula okusobala, akungabazeki yini? Ngezinye izikhathi azikwazi ukuqinisekiswa, ngoba ufuna ukufihla noma ngenxa yokuthi unezizathu zokuzisekela.
Izizathu zokuthi kungani owesifazane engalinge ukuthatha isinyathelo sokuqala
Izimpawu ezingadlulisa, ngaphandle kokungabaza, azikwazi ukufihlwa kakhulu. Nokho, uzokholelwa ukuthi ukuziphatha kwakhe akuyona into engavamile futhi lezi ama-nuances amancane akwenza ubone ukuthi uyakuthanda ngempela. Owesifazane uzozama ngangokunokwenzeka ukufihla ukuthi uyayithanda indoda, ngaphandle uma ezama ukufihla okusobala ngesizathu esithile.
Amahloni Kungesinye sezizathu ezicacile. Ngaphakathi kwalokhu kushiwo, kufanele uhlole ukungavikeleki kwakho, ngoba leli qiniso libusa ezinqumweni eziningi ezibalulekile. Ukungabi namathuluzi anele okubhekana naleli qiniso noma ukubuyela emuva kuyisizathu esanele.
Lowo wesifazane angase angabonakali enamahloni, kodwa kunalokho abazidlayo, abazidlayo nabazethembayo. Futhi kungenxa yokuthi, nakuba ebheka yonke imininingwane yokuthi ungumuntu olondeke ngokuphelele, mhlawumbe akanawo wonke amakhono okubhekana nesenzakalo esinjengalesi.
Esinye sezici ezenza abantu bafune, kodwa bangakwazi, yingoba bane- ukwesaba okwesabekayo ukwaliwa. Bazizwa benengcindezi enkulu yokufuna ukwenza yonke into kahle kodwa nokho, bakholelwa ukuthi ngokuhamba kwesikhathi izenzo zabo zingadlala ngabo.
ubuhlakani bemizwa Ingase futhi idlale isipiliyoni esibi, kanye nokungabi namakhono okuxhumana anele ukuze bakwazi ukuveza imizwa yabo. Kulezi zimo, owesifazane angase akhubeke kwezinye zazo zonke izimfanelo ezingenhla futhi, ngaphandle kwesixazululo esingenzeka, abalekele isimo.
Indoda ifihla kanjani ukuthi iyamthanda umuntu wesifazane?
Owesifazane onesibindi futhi oqinisekayo uzobheka umfana amthandayo futhi ngeke abheke eceleni. Nokho, uma ebheka eceleni kungasho ukuthi akanandaba noma uyahlakaza. Kunezizathu eziningi zokuthi kungani ungayibeka eceleni, futhi ingabandakanya amahloni. Uma ephinda ekubuka ngemuva kokuthi umphambukisile, lokho kungenxa yokuthi unesithakazelo kuwe.
Kunezimpawu ezimbalwa ezingacutshungulwa ukuze kutholwe ukuthi lowo wesifazane unentshisekelo, ngisho noma kungabonakali kanjalo. Umuntu wesifazane kungenzeka ukuthi useshintshile ukuziphatha kwakhe ngoba kukhona umuntu amthakaselayo, nokho-ke, uhlala ezenzisa. Izizathu zokuthi kungani ifihla sesivele sizibuyekeze ngaphambilini, kodwa izimpawu zichazwe ngezansi:
Ukumamatheka. Uma ehlala emomotheka kamnandi, ehlukile, ethandeka kakhulu, enenkohlakalo noma ethukile, kuyinkomba ecacile yokuthi unentshisekelo kuwe.
Sinakekele kakhulu isithombe sakho. Uma usumazi kudala lowo wesifazane, ungase ube nomuzwa wokuthi indlela yakhe yokugqoka isishintshile, unomuzwa wokuthi manje usegqoka kakhulu. Izingubo zakho nezinwele kuzonakekelwa kakhulu futhi uzosebenzisa amakha amnandi.
njalo ezindaweni ezifanayo noma ihlezi iseduze nemibuthano yakho yokuxhumana nabantu. Akuyona ingozi uma kwenzeka izikhathi eziningi, futhi lokho kungenxa yokuthi unesithakazelo ukunyakaza kwakho futhi uyohlale ecasula lezo mihlangano.
Indlela okhuluma ngayo nayo izosho ukuthi uyakuthanda yini. Umusa yikho okubalulekile Uzohlala elalele yonke into omtshela yona futhi noma ukhuluma, abheke ukuthi kanjani akakhohliwe imininingwane eminingi ezingxoxweni zakho.
Hlola izimpawu zomzimba wakho. Uma ungafuni ukuthi ivezwe, mhlawumbe umzimba wakho uzonikeza imininingwane ethile. Isibonelo, uma umzimba wakhe nobuso kuhlale kukhombe kuwe, lokho kungenxa yokuthi unentshisekelo. Uma uthinta njalo izinwele zakho noma ulungisa izingubo zakho, lezi nazo ziyizimpawu.
Uma ukhuluma unake uma ekubuka emehlweni noma ubheke ezinye izingxenye zobuso, njengezindebe. Uma izinyawo zakho ziqhelelene kancane futhi udlala ngisho namaqakala.
Njengoba kunikezwe izinkomba, izimpawu, ubufakazi noma ukufihla okungafiki engqondweni, uma uthanda lowo wesifazane futhi kungekho muntu othatha isinyathelo kuqala, kuzodingeka uthathe isinyathelo esincane. Lapho ungabaza, akukho lutho olungcono Zama ukuzethula noma wenze i-aphoyintimenti. Uma isikhathi esiningi sesidlulile futhi awukwazi ukulinda isikhathi eside, kufanele wenze isinqumo futhi uzame ngokuzithoba ukuthola ukuthi ngabe lowo wesifazane unokuthile akufihlayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Izithandani Nezocansi » Umuntu wesifazane uzifihla kanjani ukuthi uyakuthanda?
Ukubukeka kothando: indlela yokuzibona
Okuthrendayo kuleli hlobo lango-2022